Zimbabwe Begins Negotiations With South Africa Over Zimbabwe Exemption Permit
Zimbabwe has begun negotiations with South Africa over the Zimbabwe Exemption Permit (ZEP) arrangement after the neighbouring country said it would not extend them beyond December 31.
In a statement yesterday, Zimbabwean ambassador to South Africa, David Hamadziripi said negotiations had started between the two countries.
Hamadziripi said they would urge their South African counterparts to disseminate information on time as such decisions impacted the livelihoods of thousands of people. He said:
It is the embassy’s expectation that this decision will be implemented with the minimum of disruption to the lives and livelihoods of the affected individuals and their families. The government of the Republic of Zimbabwe takes note of this decision by the government of the Republic of South Africa, a close neighbour with which Zimbabwe enjoys excellent relations.
The government of the Republic of Zimbabwe urges and encourages all its nationals, beneficiaries of the special dispensation, to comply with this decision and to co-operate in its implementation.
Ngavangobvisa maboarders tingova another small village of SA coz kuSA ndokumba to be honest guys 🙄
Kovari kuno vanobva kusouth vakaroorwa kuno nemazimba tovadzingavo here
Ngwenya Bornwise 5 months ago
Kkkk Kumba kuchauya Kuno guys they must remove the boarder if they can't control us
Kkkkkk yaa True wangu